Shalay Hantiwadaaggii Cilmga, Maanta Hanaan Federaal ah! Qalinka: Xassan Xayle
July 30, 2012 | Posted by admin Shalay Hantiwadaaggii Cilmga, Maanta Hanaan Federaal ah!
Maalmahan waxaa si aad ah indhaha loogu hayaa arrimaha siyaasadeed ee dalka ka socoda iyo sida madaxda dowladda DKMG ay ka yeelayaan dhameystirka ‘ROADMAP-ka’ kassoo ay ugu muhiimsantahay: in laga gudbo marxaladda KMG ah, la dhiso ergo ansixida Dastuurka Cusub, lasoo xulo xubno baarlamaan oo tiro yar iyo dhismo dowlad hogaan cusub leh oo dalka ka hawlgasha waxii ka danbeeya 20-ka bisha Agoosto ee sanakan 2012-ka.
Laga soo bilaabo dhalashadii dowladnimada ee 1960-kii ilaa ay burburta Dowladdii Dhexe horaadkii 1991-kii, hanaanka xukunka dalka waxuu u kala guuray nidaam dimoqoraaddi ah oo in ka badan 70 xisbi siyaasadeed ay u tartameen kuraasta barlamaanka iyo awoodda dalka iyo nidaam, markii dhaqanka iyo duruufta bulshada Soomaalida loo barbar dhigo, hanaan iyo fakar siyaasadeed ahaan aad u fog, kasoo ahaa Hantiwadaagga Cilmiga, (Marxists Socialism) oo aan ka
Hanaanka xukumadihii hore ee qaabka Dimoqaradiyada u jiheysnaa ayaa, inkastoo uu lahaa dhinacyo wanaagsan, guud ahaan yeeshay dhaliil badan oo ku saabsan dhinaca maamulka iyo cadaaladda bulshada; dimoqoraadiyadaas oo aan si mas’uuliyad ah loogu dhaqmin ayaa ugu danbeentii keentay FAWDO siyaasadeed oo aan muran ka taagneyn in sababteedu ahyed caqliyadda qabyaaladeed ee bulshada iyo dhaqanka siyaasinntii waagaas.
Marxaladdaas oo u dhexeyday sanadihii 1960-1969-kii, waxaa dalka maamulayay xukuumado rayid ah, oo inkastoo ay horseed u ahaayeen hanaqaadkii dowladnimada Soomaaliya ay, hadana, in badan oo hogaamiyaashaas ka mid ah ay si muuqata ugu dhaqamayay qaraabo kiil, ku tagrifal hantida guud iyo, weliba, xad-gudub ku saleysnaa awood sheegasho.
Waxay arrintu sii xumaan jirtay markii ay timaado doorashooyinka kuraasta baarlamaanka, tasoo xarumaha doorashada ay ka dhici jirtay duudsiin iyo ku tagrifal awoodda dowladeed; waxaa codad been abuur ah, sanduuqa doorashada, loogu shubi jiray ciddii ay mas’uuliinta sare ee dowladdu rabaan.
Si ay ahaataba, isbadalkii dhacay 1967-dii, oo ay hogaanka dalka qabteen Allaha u naxariistee, Mudane Cabdirashiida Cali Sharmaarke oo nqoday madaxweyne iyo Mudane Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo isaguna noqday ra’iisul wassaare, waxaa ahmiyad kowaad la siiyay inla hagaajiyo xaaladda siyaasadeed iyo dhibaatooyinka bulshadeed ee ka dhashay maamul xumada iyo cadaalo daridii baahday waqtigaas.
Ayaan daro, iyadoo rajadii laga qabay inla hagaajiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka dhinacyad qaar horumar fiican laga sameeynayay, qaybo kalena ay dhutin ku jirto, ayaa 15-kii bisha Oktobar 1969-kii waxaa toogasho lagu dilay Madaxweyne Cabdurashiid Cali Sharmaarke; dhacdadaas murugada laheyd ayaa keentay in dalku galo qas ba’an iyo muran ku saabsan cidda qabaneysa xilka madaxtinimada dalka.
Runtii, waxaa figrad laysku raaci karo ah in xaaladdii siyaasadeed ee waagaas jirtay, 1960-1969- kii, lagu tilmaamo inay aheyd ‘Dimoqaraadiyad Qabyaaladeed’ taasoo, marka loo fiirsadao, tusineysa sida ay qabaa’ilku ugu xusul duubayeen xukunka iyadoo runtii ay beeluhu, olole siyaasad, dhinaca abaabulka iyo rabitaan hogaanka dalka aad u kala hanweynaayeen.
Sida jirta, labo maalmood ka dib waxaa warfaafinta lagu shaaciyay in taliyihii Xoogga dalka ee waqtigaas, Jeneral Maxamed Siyaad Bare, uu hogaaminayo kacdoon u curtay bulshada Soomaaliyeed oo ka tarjumaya doonista shacbiga ee ku aadan inla helo isbadal weyn oo dalka ka samatabixiya dhibaatada siyaasadeed iyo bulsho ee ka dhalatay maamul xumada iyo cadaalo daradii ay ku shaqynayeen xukuumadihii ra’iydka ahaa ee, ilaa iyo gobonimadii, dalka ka talinayay.
Iyadoo dalku marxaladdaas cusub galay, mawjadda KACAAKUNA ay xooli ku socotay ayaa bishii Oktoobar 1970-kii, hal sano inqilaabkii ka dib, waxuu hogaanmiyaha Golahii Sare ee kacaanku Jeneraal Siyaad ku dhawaaqay in dalka laga hirgalindoon hanaanka Hanti-wadaagga Cilimiga, (Scientific Socialism) kasoo, sida uu sheegay, aan ka hor imaaneyn, lakiin, waafaqasan Diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida –waxaa la ogsoonyahay in tilaabadaas ay timid iyadoo wax DOOD QARAN ah, (National debate) ama la tashi dadka aqoonta leh aan laga sameyn.
Mar kaliya dalka in lagu soo rogo hantiwadaagga Markisim-ka waxay keentaya in dhaliil weyn, oo aan si cad loola bareer karin, loo jeediyo madaxda Golahaha Sare ee Kacaanka, sababtoo ah fakarka Markisimka looguma talo galin bulsho, sida Soomaaliya oo kale, aan ka sameysneyn dabaqad ama aan aheyn mid ku hormarsan dhinaca wax soo saarka warshadaha; taasoo ay dheertahay in Soomaaliya, hiddo iyo dhaqan, tahay bulsho rumyesanyihiin Diinta Islaanimka.
Waxaan la ogsoonahay ama si uun loo qiyaasi karaa saameynta ay yeelatay mashaakilkii laga dhaxlay hirgalinta Hantiwadaaggii lagu sheegay inuu cilmiyeysan yahay, iyo wajigii siyaasadeed ee uu yeeshay ‘Kacaankii Oktoober’ ee isna lagu tilmaamay, waayahaas, mid barkeysan! Layskuma hayo in hogaanka iyo siyaasadihii KACAANKA ay abuureyn dhiibaatooyinkii siyaasadeed, bulshadeed iyo dhaqaale ee ugu danbeyntii horseeday dagaalkii Sookeye iyo burburkii ku dhacay qaranknimada Soomaaliya.
Shaki kuma jiro, waqtigan la joogo, in siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid hagoogi saarantahay, iyadoo sida ay wax u socdaan iyo geediga ay ku jirto aysan u muuqan, xatta, ragga madaxda ka ah DKMG, arrintaas oo walwal iyo hubaal la’aan galineysa mustaqbalka siyaaasadeed ee dalka. Iyadoo taas ay jirto ayaa su’aalo badan iyo dood waqti dheer u baahan ay ka jiraan dhawr qodob oo ku saabsan DASTUURKA CUSUB ee markii la dhaqan galiyo aan la saadaalin karin qaabka siyaasadeed ee Soomaaliya yeelan doonto.
Dadka qaar ayaa waxay ku doodayaan in qaadashada nidaamka federaalka uu ka mid ahaa heshiiskii 2004-tii ay beelaha Soomaaliyeedu ku gaareyn shirkii muddada dheer socday ee magaalada IMBAGATI, Keynay, islamarkaana lagu dhisahy DKMG aheyd ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweynahay ka ahaa.
Aragtida doodaas, waxaa muuqata, inaysan jawaab lagu qanci karo u aheyn su’aalaha dhabta ah ee ku saabasan Soomaaliya oo lagu soo rogo hanaan federaal ah iyo waaxyaha dalka oo ilaa heer noqon doona qaar, siyaasad ahaan, kala madax banana.
Su’aalaha muhiimka ah ee shakiga galinaya in qaab federaal ah uusan xal u noqneyn mushkilada Soomaaliya waxaa ugu horeeya: haddii ay QABYAALADDU aheyd sabata ugu weyn ee abuurtay dhibaatooyinkii siyaasadeed iyo bulshadeed ee horseeday Colaaddii Sokeeye iyo burburkii qarnimada Soomaaliyeed, –qaadashada nidaamka federaalka ah sideebu xal ugu yahay dhibaatada iyadoo ay muuqato inuu assaaska u dhigaayo ama sharciyeynayo mamul goboleedyo
qabiil ku saleysan?!
Intaas madaxa-wareer ku filan, waxaa kale oo aad u muuqnaya, iyadoon aan lagu darin tan Soomaali-land, in ififaalaha uu bixinayo xiriirka u dhexeeya Dowladda Dhexe ee KMG ah iyo maamul goboleedka Punt-land, markii dhincyo badan la fiiriyo, uusan marnaba tusaale fiican u aheyn hanaanka federaalka ee la doonayo in dalka laga dhaqan galiyo.
Ugu danbeyntii, geedi socodka siyaasadda Soomaaliya waxuu u muuqdaa inuu gudcur iyo waddo madow hayo; taasoo aan la hubin qaabka iyo wajiga uu Dastuurka Cusub u yeeli doono siyaasadda dalka iyo midnimada bulshada.
Waxay marxaladihii ay soo martay dowladnimada Soomaaliya, oo ilaa iyo gobonimadii, gabi- dhacleyn iyo marba dhinac u guur ku jirtay ay tusineysaa in QABYAALADDU, mar walba, ka xoog rooneyd ama ka saameyn weyneed FIKRADIHII iyo hanaankii siyaasadeed ee in dalka lagu hago loo qaatay, yaa hubaal ka jooga qadaadashada habka federaalka ah!!
*(1) Maqaalkan waxaan qaybo ka mid ah kasoo qaaday baaritaan aan ku sameeyay Taariikhad Siyaasadda
*(2) Erayadaas waxay ka mid yihiin heesta WACDARAHA ADUUNKA ee Hadraawi tiriyay horaadkii 70-meeyadii
« Watch: Ramadan Mubarak!- One way to style your hijab (Veil)
GalMudug Oo Loo Dhaariyay Gud. B/Laman Cusub »
FIFA – Latest NewsTrio progress as duo set up play-off meeting'Brazil here we come,' Iran fans singThe FIFA World Cup: A model for sustainabilityTrio book passage to BrazilKennedy books Australia's place	Gudiga Samatabixinta Beesha Absuge